Sidee loo cusbooneysiiyaa Moto X 2014 ilaa Android 5.0 Lollipop | Androidsis
Sida loo cusbooneysiiyo Moto X 2014 nooca cusub ee xaday ee Android Lollipop
Francisco Ruiz | | Motorola, Tababarada, Noocyada Android
Kaliya dhowr saacadood kahor halkan halkan Androidsis, waanu kugu wargalinay Noocii Ugu Dambeeyay ee Android Lollipop Version Leaked For New Moto X 2014, nooc aan xitaa ku aragnay a fiidiyow buuxa oo ku saabsan 10 daqiiqo oo dheer, taas oo caddaynaysa horusocodkeeda iyo xasilloonida baaxadda leh ee nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Andy uu ku leeyahay caloosha taleefanka ugu muhiimsan ee Motorola.
Hagaag, hadaad xiisaynaysid ku cusbooneysii Moto X 2014 nooca cusub ee xaday ee Android LollipopKaliya waa inaad sii wadataa aqrinta maqaalkan maadaama aan kuu sharaxeyno wax walboo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad gacanta ugu cusbooneysiiso boosteejadaada oo aad markaa tijaabiso noocaan cusub ee Android ah, xitaa ka hor inta aysan si rasmi ah u howlgelin shirkadda Motorola.
Shuruudaha maskaxda lagu hayo
Este keydka qalabka 'Android 5.0 Lollipop' ee Motorola Moto X 2014 waa midka saxda ah ee Motorola u adeegsanayo tijaabinta gudaha. Waxaan u soconaa inay tahay isla firmware-ka la sifeeyey ee aad awood u yeelatay inaad ku aragto sawirada maqaalka ee aan saaka soo bandhigay.
Si loo tijaabiyo nuqulkan cusub ee Android, waxaan ula jeedaa ku cusbooneysii Moto X 2014 nooca cusub ee xaday ee Android Lollipop, waa inaan kaliya buuxino shuruudaha soo socda:
Hayso nooca Motorola Moto X 2014.
Taasi terminal-ka aan xididaysan.
Bateriga ha lagu soo oogo ilaa 100 x 100 awoodiisa.
U sahlo ka-saaridda USB-ka goobaha saldhigga si aad u cusbooneysiiso. Fursadahaan waxaa laga dhex helayaa xulashooyinka ikhtiyaarrada soo-saareyaasha, qaar ka mid ah xulashooyinka qarsoon ee ku jira meertada meerteena 'Android', laakiin taasi waxay u muuqan doontaa uun adoo galaya macluumaadka Degaanka / taleefanka oo aad gujineyso toddoba jeer oo isku xigta nambarka dhismaha.
Marka waxaas oo dhan la sameeyo iyo iyadoo loo maleynayo inay halisteeda tahay inaysan noqonin nambarkii ugu dambeeyay, waan awoodnaa cusboonaysii Moto X 2014 nooca cusub ee xaday ee Android Lollipop kaliya raac talaabooyinkan fudud:
Waxaan soo dejisanay firmware xaday dhisid Blur_Version.21.21.42.victara_tmo.tmo.en.US (652MB) isla isku xirka.
Waxaan u guurineynaa asalka xusuusta gudaha ee Moto X 2014 oo aan dooneyno inaan cusbooneysiino.
Waxaan si buuxda u damineynaa oo aan u galnaa habka soo kabashada annaga oo furayaasha mugga hoos u dhigeyna xoogaa xoogaa ilbiriqsiyo ah, shaashadda u muuqata waa inaan u dhaadhacnaa ikhtiyaarka soo kabashada oo leh mugga mugga oo aan ku xaqiijinno furaha mugga kor.
Markaan galno dib u soo kabashada waxay u sahlanaan doontaa sida hoos loogu dhaadhaco Codsiga cusbooneysiinta ee sdcard ikhtiyaarka isla markaana riix batoonka Awoodda si loo xaqiijiyo xulashada, ka dib waxaan u dhaqaaqi doonnaa waddada aan ku nuqulno feylka faylka lagu soo dejiyey tallaabada ugu horreysa oo aan sidoo kale ku dooran doonaa iyada oo loo marayo badhanka Power.
Nidaamka biligleynaya ee qalabka cusub ee loo yaqaan 'Android Lollipop firmware' ayaa bilaaban doona waana inaan sugnaa oo aan si dulqaad leh u sugnaano oo aan waxba taaban ilaa iyo inta teermilku kaligiis dib u bilaabayo.
Tan waxaan horeyba ugu raaxeysaneynaa dhismahan rasmiga ah ee ugu horreeyay oo si toos ah uga soo dhacay kooxda tijaabada Motorola. Dhismo aan kugu xusuusineyno inaysan weli ahayn nooc kama dambeys ah oo ay tahay inaad mar walba ku iftiimiso mas'uuliyaddaada buuxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Sida loo cusbooneysiiyo Moto X 2014 nooca cusub ee xaday ee Android Lollipop
Waan la halgamayaa dijo
1. Bootloader waa in la furaa ??
2. Haddii aan cusbooneysiiyo nooca beta, nooca ugu dambeeya ma imaan doonaa OTA?
Mahadsanid, maqaal aad u fiican
Ku jawaab Lucho
Waxay kaliya u shaqaysaa MotoXT1095? Waxaan hayaa MotoXT1097 .. jawaab ayaan sugayaa, mahadsanid.
Cristián waan cusbooneysiiyay XT1097-kayga laakiin ma ahan qaabkan .. Way ka badantahay uun dhigida ROM-ka .. Moto X-kaygu wuxuu ahaa mid bilaa cillad iyo xawaare sare leh laakiin waxaan ku qasbanahay inaan furo bootloader-ka, keydka EFS maxaa yeelay IMEI-ga ayaa lumay oo si gooni gooni ah ayuu u ifayaa modemka Latin America si aysan dhibaato ugu qabin kooxaha .. Xaaladeyda waxaan joogaa Chile ..
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada waan la dagaallamayaa, sidoo kale waxaan joogaa dalka Chile oo mootada x way cadahay, ma isticmaashay habka ku jira htcmania? Waan dareemayaa sidaas, laakiin tii imei waxay i siisaa xoogaa dareen xun.
Mauricio Lezano dijo
Haye, waxaan ka imid Chile oo ka tirsan shirkadda dabcan, ma i caawin kartaa?
Jawaab Mauricio Lezano
Haa .. Isla adeegsigaas .. Haddii aad wax walba u raacdid warqadda wax riwaayad ah kuma lahaan doontid .. Sidoo kale akhri faallooyinka si aad uga ogaato biligaynta modemka iyo waxaas oo dhan ..
mari casharka si aad ugu samayso salaan
sebastian cabrera dijo
Xidhiidhku mar dambe ma shaqeynayo, waxay umuuqataa inay dhaqaajiyeen: /
Ku jawaab sebastian cabrera
Ha isticmaalin qaabkan.
Ma shaqeynayo, ugu yaraan xt-1097
Ka taxaddar leben ..
hadda boggu ma shaqeynayo guud ahaan qaybta xiriiriyeyaasha oo qoraalku wuxuu ku sii jiraa buluug
Waad salaaman tahay, waxaan ka iibsaday motorola xt1045 saaxiibkey dabcan waxaanan rabaa inaan u akhriyo movistary, mana awoodo maxaa yeelay nidaamka ayaa i siiya koodhka oo dhan waxaana la galayaa lambarkaas waana sii waday, fadlan iga caawi inaan awoodo noqo jeee
Ku diyaari aragtidaada Qandaraaslaha Dilka: Toogte
Soo dejiso oo rakib kalkuleylka Android Lollipop on kasta oo 4.3 ama ka sareeya ah